Tailormade Joinery t/a Scampee Manufacturing - Home
+27 (0)32 947 0435
Iglasi yefestile ephelele
Iglasi yefestile ncicnci
akwaMock Sash aPhelele
akwaMock Sash amaNcinci
iMock Sash Victorian
Utshitsho lwamva lemveliso
Malunga ne-Tailormade Joinery
U-Tailormade Joinery ulanda iingcambu zakhe ukususela ngonyaka ka1972 apho abalawuli abakhulu bangoku uPeter Gooderson, uRishy Tilsee noMoses Bengu badibanela inkampani ePinetown, KwaZulu-Natal.Ukuzinza kwabalawuli nolwazi kwavela njengokuzinikela okuqhubekayo kumgangatho nempucuko.
IFetri yaseShakaskraal, eKZN, yenziwe yangumnikezi wekhampani ezizimele ezisixhengxe apho uphuhliso lokwenyani lwenzeke khona kwaye benyusa abanikazi kwizakhono nesidima. Zonke iinkampani ezinikezayo zikumgangatho 1 ezihamba ngokwe-BBE kwaye u-Tailormade Joinery unjalo, ukuMgangantho 1.
Sizinikela ukuhamba ngokoMthetho woKwakha weSizwe, ngokuthe ngqo, owe-SANS 1040-XA � wokoNela koMbane nosetyenziso mbane kwindawo yokwakha. Le mithetho iza kwenyusa izakhono zeekhampani kwaye uphume kumgangatho ophucukile eyenye yezizathu eyenze sathobela imithetho kwaye silishishini eliphuma phambili labadibene enemveliso zethu eziphumelele uVavanyo olunzima lakwa-SANS 613 lamanzi, ukugqobhoza komoya kunye nokuzinza kwimoyezulu. Ezi mvamvanyo ziyaqhubeka kwaye imveliso ezishiyekile nazo kungekudala zizolandela.
Iimveliso zethu zavavanywa ngu-SAFEIRA kwiLabhoretri yoVavanyo buShushu kunye neziphumo, imveliso yethu yajongisiselwa ukunikeza Ufaniso loKwenza koMgangatho woMbane zemiGangatho U kunye nolunye ukalo olufunekayo ngaphantsi kwe- SANS 10400 kwiLungu XA. Isamphula yoMgangatho u eboniswa kwiphepha lonke leemveliso kwaye kwinto nganye, kukhona iziphumo ezifumanekayo kusetyenziswa u+/- 190 wehlobo leglasi. Kuzo zonke, sinethala elingaphaya kwama-40,000 ezivuselelayo ezinganikezwa kwaye zishicilelwe ngaphandle ngokunikeza isicelo. Sigqibe isikhokhelo ukunceda nokudibanisa.
Abantu abaninzi banikeza imbalana ngokuthi le mithetho ayizukusetyenziswa - ezo ayizonkolo zethu.Isebe leNtlalo yoluNtu babaqashile kwiprojekithi yabo yezindlu kwaye noMthetho weSizwe weeNkcazo eziNyanzelekile ukuba zibekhona ngokoMthetho we-NCRS (5 ka2008) ukufaka le mithetho. Xa kukhona into engahambi kakuhle kwiprojekithi, ke ngoko bonke ababandakanyekayo bajonga eMthethweni ukufumana isikhokhelo nomabakwenze. Ukusebenzisa imveliso yethu kukunika isiqinisekiso.
Eli qela elazisa intsimbi ezakhelwayo ngaphakathi elizweni ngoku bazisa ikhuni le-Accoya, impuculo nekhuni elenza kubengcono elihlala lulukhuni kwaye alisebenzisi zinto eziyingozi.Siza kusebenzisa u-Accoya ukuqinisa iimveliso zethu neqinisekisa iindawo eziphuculwe ukuba azuzukubola kwaye azizukuhlaselwa zirhorho kwiminyaka engama-50.Iinkcukacha eziphelele zale mpucuko entle kakhulu zingabonwa ngokundwendwela u-www.freedomwood-accoya.
Njenngenkampani ezinikele yaseMzantsi Afrika, sikwaxhasa ukwehlukana kwethu ngeelwimi kwaye sinokhetho ukwenzela wena lula.
I-MMAL (uMgangantho waseMzantsi Afrika weLizwe) amalungu N angama-10400 neXA
Sliding Doors Energy Rating Certificate
Windows Energy Rating Certificate
I-Tailormade Joinery zonke iimveliso zamakhuni ukuba zibelukhuni lwe-Accoya.
Ikhuni le-Accoya® ziziphumo zophando lweminyaka engama-80 ezizise kunye ulwakhiwo olude kunye nekhuni elingqinwe kakhulu kwindlela yokuphucula - i-acetylation - kunye neekona ezihamba phambili zobungcaphephe ukwenza ikhuni elisebenza kakhulu.
Ikhuni le-Accoya® lingasetyenziselwa yonke into ukususela kwiifestile ukuya kumacango, umgangatho ukuya kwisigqumathelo, iibhlorho ukuya kumaphenya kwaye ifakwa nakwiinawo ezibonakalayo ezingenampahla efanele.
Iminyango yangaphandle kufuneke iqine, ime kwindawo ezahlukene (ukunqanda iminyango ukuba ibenzima ukuvula naokuvala kwimo yezulu embi) kwaye kubelula ukuyigcina. Ikhuni lakwa-Accoya® wood luyafikelela kulo mgangatho kwaye lingasetyenziswa ukwenza isakhiwo esilula okanye esizotywe nzulu ngendlela okhetha igqitywe ngayo.
Isatifiketi zohamba ngokoMgaqo
40 000 + Glass Types Certificates (available on request)
Doors Energy Rating Certificate
Doors Simulated Energy Performance Rating
Windows Simulated Energy Performance Rating
Copyright © 2014 - All Rights Reserved - tailormadejoinery.co.za
Website by Agemo - Visual media specialists